Midowga Afrika oo ciidamada kala baxaya dalka Somaliya
ADDIS ABABA- Ururka Midowga Afrika ayaa sheegey inuu qorsheynayo in ciidamadiisa kala baxo dalka Somaliya sanadka 2020 kadib markii sanado badan isku dayey inuu xasilayo wadankaan ku yaala geeska Afrika.
Midowga Afrika xafiiska amniga ayaa soo saarey asbuucaan qoraal uu kaga hadlayo kadib markii caqabado badan oo is-dabayaala oo lasoo gudboonaadeen 22000 ciidamada ah kuwasoo kamid yihiin mushahar la'aan haysata xoogaga AMISOM.
Qoraalkaan ayaa sheegey in qorshaha ka bixista uu yahay in mas'uuliyada amniga si taxadar leh ugu wareejin doonaan ciidamada Somaliya laga soo bilaabo sanadka 2018-2010.
Go'aankaan ayaa soo baxay kulan June29,2016 dhexmarey wadamada ciidamadooda ka joogaan Somaliya kuwasoo la yoraahdo AMISOM.
Midowga Yurub oo ah maalgaliyaha ugu weyn ee ciidamadaan ayaa sheegey iney go'aansadeen in da-dajiyaan bixinta mushaharka dib u dhacey ee ciidamada AMOSOM.
Brundi oo laga jarayo lacag Somaliya ay ku qaadato
Soomaliya 30.03.2016. 07:21
NAIROBI, Kenya- Wadamada reer Yurub ee bixiya lacagaha lagu tageero amniga Somalia ayaa qorsheynaya iney ka jaraan lacag farabadan oo ay siin jireen ciidamada Nabad ilaalinta dalka Brundi kuwasoo kamid ah howlgalka AMSOM ee dalka Somalia.
​AMISOM oo Dib Ula Wareegtay Magaalada Marka
Soomaliya 06.02.2016. 11:15
​Midowga Yurub oo ka hadlay dhimista mushaharka AMISOM
Soomaliya 27.04.2016. 14:37
Puntland 05.08.2018. 08:53
Somalia: Ciidamada AMISOM oo qabsadey Degmada Janaale
Soomaliya 05.04.2016. 11:48
Madaxweynaha Somalia iyo Guddoomiyaha Midowga Africa oo Muqdishu ku kulmay
Soomaliya 18.03.2017. 11:13